Wayszọ atọ iji bulie Jizọs elu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Paolo Tescione	Edere ya November 3, 2020 November 3, 2020
Anaghị m echeta n’oge ikpeazụ m hụrụ ka mba anyị kewasịrị ekewa.
Ndị mmadụ na-akụ osisi ha n'ime ala, na-ebi na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị ahụ dị iche iche, na-ewere akụkụ a kapịrị ọnụ ka olulu ahụ na-eto n'etiti ndị enyi nwere onyonyo.
Ezinụlọ na ndị enyi anaghị ekwenye. Mmekọrịta na-agbasa. N’oge a niile, onye iro anyị na-achị ọchị n’azụ ebe anyị maara na atụmatụ ya ga-emeri.
Olileanya na anyị agaghị achọpụta.
Ọfọn, M, dịka ọmụmaatụ, agaghị m enwe ya.
Ahụrụ m usoro ya ma adị m njikere ikpughe ụgha ya kpamkpam.
1. Cheta onye n’achi
N'ihi ọdịda ụwa anyị agbajikwa. Ndị anyị na-echegbu ma na-afụ ụfụ.
Okwu na-agbawa obi anyị hụrụ n’iru anyị dị ezigbo mkpa, metụtara ndụ na ọnwụ. Ikpe na-ezighi ezi na ikpe ziri ezi. Ahụ ike na ọrịa. Udo na ọgbaghara.
N’ezie, nsogbu ndị a dị adị kemgbe e kere mmadụ. Ma Setan maliteghachiri egwuregwu ya, na-enwe olileanya na anyị ga-atụkwasị obi anyị na ebe niile adịghị mma.
Ma, Chineke ahapụbeghị ụmụ ya ka ha ghara ịna-echebe ha. O nyela anyị onyinye nke nghọta, ikike ịgabiga apịtị ndị iro ma mata ihe dị mma. Mgbe anyị lere ihe anya site na mbara igwe, ngbanwe ọhụụ na-eme.
Anyị ghọtara na anyị enweghị okwukwe na usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Anyị enweghị ntụkwasị obi na izu oke nke onye isi ọ bụla. Anyi etinyeghi ntukwasi obi anyi na ndi ozo, mmemme ma obu nzuko.
Mbanụ. Kama nke ahụ, anyị na-etinye ndụ anyị n'aka ịhụnanya nke Onye ahụ nọ ọdụ n'ocheeze ahụ.
N'agbanyeghị onye meriri na ntuli aka ndị a, Jizọs ga-abụ Eze.
Ma nke a bụ ezigbo ozi ọma! Site n'echiche nke ebighi ebi, o nweghi ihe o mere na otu nke anyi na akwado. Ihe niile dị mkpa bụ ma anyị a ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Onye Nzọpụta anyị.
Ọ bụrụ n’anyị kwụ n’azụ Okwu ya na ndụ ọ biara inye, enweghị mbuso ọgụ ma ọ bụ mkpagbu nwere ike iweda ntụkwasị obi anyị n’Obe.
Jizọs anwụghị ịbụ onye ọchịchị, nke onye kwuo uche ya ma ọ bụ nke onwe ya. Ọ nwụrụ ka o merie ọnwụ ma sachapụ unyi nke mmehie. Mgbe Jisos si n’ili bilie, o webatara abụ mmeri anyị. Ọbara Kraịst na-eme ka anyị nwee mmeri na ọnọdụ niile, n'agbanyeghị onye nyere iwu n'ụwa. Anyị ga-arịgoro ihe mgbochi ọ bụla Setan zitere n'ihi na Chineke ewetularị ya.
N'agbanyeghị ihe na-eme ebe a, site na amara nke Chineke, anyị emeriela.
2. Na-anọchite onye kere anyị, ọ bụghị nwa akwukwo
Ọtụtụ oge anyị na-ekwe ka nchekasị na nsogbu nke ndụ anyị kpuchie ịdị adị nke eluigwe. Anyị echefughị ​​na anyị abụghị nke ụwa a.
Anyi bu nke alaeze di nso, nke di ndu ma na-agakwa ije nke na eme ihe nile.
Onwe m, anaghị m etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, belụsọ na obere isi okwu. Achọghị m ka ndị ọzọ hụ m. Kama, ana m ekpe ekpere ka ndị ọzọ hụ m dịka ike dị ike maka eziokwu nke ozi-ọma.
Achọrọ m ka ụmụ m hụ na ahụrụ m ndị ọzọ n’anya dịka Onye-nzọpụta m siri hụ m n’anya. Achọrọ m igosi ndị enyi m na ezi-na-ụlọ ihe ọmịiko, nlekọta na nkwenkwe pụtara. Achọrọ m ịnọchite ma gosipụta onyonyo nke Onye Okike m, Onye na-eme ebere na Onye Mgbapụta nke ndị gbajiri agbaji.
Mgbe ndị mmadụ lere m anya, achọrọ m ka ha mata ma hụ Chukwu.
3. Na-adị ndụ ime ihe na-atọ Chineke ụtọ, ọ bụghị oriri na nkwari
Ọ dịghị òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enweghị ntụpọ. Ọ nweghị ndị otu na-enweghị ntụpọ. Ma nke ahụ dị mma. Naanị Otu na-achị achị n'ụzọ zuru oke. Anyị agaraghị adabereworị na gọọmentị maka amamihe na mweghachi.
Ikike ahụ bụ nke Chineke, Akwụkwọ Nsọ na-agwa anyị na iguzosi ike n'ihe anyị kwesịrị ịdịnyere Onyenwe anyị.
Baịbụl kwuru, sị: “thiswa a na-agabiga, ya na ihe niile mmadụ chọrọ. Ma onye ọ bụla nke na-eme ihe na-atọ Chineke ụtọ ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi “. (1 Jọn 2:17 NLT)
Gịnịkwa na-amasị Chineke?
“Ọ gaghị ekwekwa omume ime ihe na-atọ Chineke ụtọ ma ọ bụrụ na okwukwe adịghị. Onye ọ bụla chọrọ ịbịakwute ya ga-ekwenye na Chineke dị adị nakwa na ọ na-akwụ ndị ji ezi obi na-achọ ya ụgwọ ọrụ ”. (Ndị Hibru 11: 6 NLT)
"Ya mere, site n'ụbọchị anyị nụrụ, anyị akwụsịghị ikpe ekpere maka gị, na-arịọ ka i jupụta n'ọmụma nke uche ya n'amamihe na ọgụgụ isi niile nke mmụọ, ka ị wee na-eje ije kwesịrị Onyenwe anyị, na-atọ gị ụtọ n'ụzọ zuru oke ya, na-amị mkpụrụ n'ezi ọrụ ọ bụla ma na-amụba ihe ọmụma Chineke. (Ndị Kọlọsi 1: 9-10 ESV)
Dịka ụmụ Chineke dị oke ọnụ ahịa, ọ bụ nsọpụrụ anyị ịbụ aka ya, ụkwụ ya na okwu ya n'ụwa nke a na-ata ahụhụ. Ebumnuche anyị bụ ime ka ndị ọzọ mara ịdị mma anyị nwere ike ihu na Ya na ịma mma nke ịmara Chineke karịa.Ma anyị enweghị ike ịme ya, ma ọ bụ mee ihe na-atọ Chineke ụtọ, na-enweghị OKWUKWE ...
Ọ bụghị okwukwe na onwe anyị ma ọ bụ mmadụ ma ọ bụ usoro ndị anyị kere. Kama, ka anyị bulie Jisos elu karịa ihe niile ma jigide okwukwe anyị na Ya, Ọ gaghị eweda anyị ala. Obiọma ya agaghị emetụta. Obi ya na-adịgide n’agbụ ndị ahụ ọ kpọrọ ma hụ n’anya.
Ebee ka anyi ga-etinye olile-anya anyi?
Worldwa a na-akụ n'anya. Ihe anyi n’ahu anya n’ekwe anyi nkwa. Echere m na 2020 emeela ka nke ahụ doo anya! Ma ihe ndị a na-adịghị ahụ anya dị n’Alaeze Nna anyị agaghị ada ada.
Ya mere, ezigbo onye na-agụ akwụkwọ, were ume miri emi ma mee ka nsogbu ahụ dị nro dị mfe. Were udo miri emi nke ụwa a enweghị ike inye. Anyị ga-eme ntuli aka n'ụbọchị nhoputa maka onye anyị chere na ọ kachasị mma. Ma cheta na anyị bụ ụmụ Chukwu, anyị ga-atụkwasị obi na ihe ga-adịgide.
Nke gara aga Post Gara aga post:Pope Francis n’ụbọchị ndị nwụrụ anwụ: olile anya Ndị Kraịst na-enye ndụ nzube
Next Post → Post ozo:Nraranye nke Nwanyị anyị na Fatima rịọrọ ka enwe amara na nzọpụta